Inkcazo kunye neMpawu eziqhelekileyo
Uvelwano luyakwazi ukufunda nokuqonda abantu kunye nokudibanisa nabanye. Ngamanye amaxesha kuqhutywa ngokuzithandela kwaye ngamanye amaxesha kungabandakanyeka, ingakumbi kumntu ongokoqobo.
I-Empath ngabantu abathintekayo kwaye bahlala benemfesane, becingisisa kunye nokuqonda kwabanye. Banokwazi 'ukuziva' into eyenziwa ngumnye umntu kunye nokuziva. Uninzi lweengxaki alukwazi ukuba oku kusebenza njani.
Basenokuba bawamkela ixesha elidlulileyo elide lokuba baziva abanye.
Ingaba bayayiqonda okanye ayifumanekanga, igalelo lwakwabelana ngezinto ezininzi eziqhelekileyo kunye nezinye iziganeko.
Impaths Sense Deep Emotions
Abantu abaninzi bafunda ukufihla iimvakalelo zabo eziqinisekileyo baze bafake umboniso kwilizwe langaphandle. Umoya unako ukuqonda kwaye uhambelane neemvakalelo zonyani zomntu ezijule ngakumbi kunokuba ziqhubela phambili. I-Empath inentliziyo enkulu kwaye iza kuyenza inceba xa ikunceda loo mntu ukuba azivakalise.
Impaths uvelwano lwabazalwana, abantwana, abahlobo, abahlobo abasondeleyo, abangaziwayo ngokupheleleyo, izifuyo, izityalo kunye nezinto ezingapheliyo. Abanye bathi ngokwemvelo baxhamla kwizilwanyana (umzekelo, i-Horse Whisperer), kwindalo, kwiplanethi, kwizixhobo zokusebenza, kwizakhiwo, okanye nakuphi na uhlobo lwezinto okanye izinto. Abanye baya kuba nokudibanisa ezinye okanye zonke ezi zinto.
Uvelwano alugcinwanga ngexesha okanye kwindawo.
Ngaloo ndlela, i-empath ikwazi ukuziva iimvakalelo zabantu nezinto ezikude.
Ukwazi i-Oneself Kubalulekile
Ingqiqo yokwazi iyahamba novelwano. Ngoxa imfesane kunye nokuqonda zizinto ezintle, ziyakunokuba yingxaki.
Ngamanye amaxesha, kunokuba nzima ukuhlula iimvakalelo zakho kwabanye.
Oku kuyinyani ngokukhethekileyo xa kuthethwa intlungu kunye nokukhathazeka, okunokubangela ukukhathazeka ngokwemvakalelo okanye emzimbeni kumntu onobubele. Ngenxa yeso sizathu, ukuphazamiseka kungahle kuhlaziywe ngamanye amaxesha ngenxa yokuba ihlabathi langaphandle lingakhupha ngamandla abo.
Kukho amanqanaba amaninzi okuba namandla. Ingaba inxulumene nolwazi lomntu ngokwazo okanye ukuqonda kwabo kwamandla okuvelana. Oku kunokuchaphazeleka ngokubamkela okanye ukungavumelani kwenceba ngabo badibene nabo, kuquka nabentsapho kunye noontanga.
Ngokuqhelekileyo, abo banomdla bakhula kunye nezi tyekelo kodwa abazifunde ngabo de kube kamva ebomini.
Imfesane inemibandela yezinto eziphilayo kunye nezokomoya. Abantu abaninzi bakholelwa ukuba uvelwano luyimfuza kwaye lugqithiselwa kwisizukulwana kwisizukulwana. Ifundiswa yinto yesayensi kunye nezinye iindlela zokuphilisa.
Uvelwano lusebenza njani
Nangona kukho into esingayiqondiyo ukuba uvelwano lusebenza njani, sinalo ulwazi. Yonke into inokugudla ngamandla okanye i-frequency kwaye i-empath iyakwazi ukuqonda ezi zintshukumo. Bayakwazi ukubona iinguqu ezincinci ezingabonakaliyo kwiso iso okanye ezi zintlanu.
Amagama okuthetha abamba umzekelo onamandla ovela kwisithethi. Inentsingiselo ethile ethile kwisithethi. Emva kwaloo nto ibinamandla okanye intsimi-yamandla, eyaziwayo njengamandla.
Ngokomzekelo, ukuzonda ngokuqhelekileyo kubangela ukuvakalelwa ngokukhawuleza okuhamba ngokukhawuleza kwegama. Inzondo yelizwi iyomelezwa ngesimo sesithethi. Nguloo mvakalelo yomntu (amandla) athatyathwa yimida, nokuba ngaba amazwi athetha, acinga, okanye aziva nje engabonwanga ngomlomo okanye ngomzimba.
I-Empath ihlala iindlovu zihamba. Bayibabhali abazalwa, abaculi, kunye nabaculi abanomgangatho ophezulu wokudala kunye nengqiqo, ngoko uwonke woluntu uzaliswa nabo. Ziyaziwa ngeetalente ezininzi njengoko iimfuno zabo zihlukene, zibanzi, kwaye ziyaqhubeka.
Ngokuqhelekileyo banomdla kwiinkcubeko ezininzi kwaye bajonge ngeembono ezibanzi.
I-Empath iquka zonke iindlela zokuphila kwaye ijikeleze zonke iinkcubeko kulo lonke ihlabathi. Unokufumana imida phakathi kwentsapho yakho, indawo yokuhlala, indawo yokusebenzela kunye noluntu olubanzi. Akukho mntu uchaza ubulili, umsebenzi, ubuntu, okanye nayiphina iileyibhile esinokuyifaka kwiindawo eziqhelekileyo, ziindawo zonke kwaye zikhona nabani na.
Aba ngabaphulaphuli bomi . I-Empath idla iingxaki zeengxaki, iingcinga kunye neengcali zezinto ezininzi. Kuze kubekho ukuphazamiseka, apho kukho ingxaki, kukho impendulo. Baza kudla ngokufuna baze bafumane enye-ukuba ngaba uxolo lwengqondo.
Impaths Sense kwaye ufunde abanye
I-Empath ihlala ikwazi ukuqonda abanye kumanqanaba amaninzi ahlukeneyo. Ukususela kwisimo sabo ekuqwalaseleni into ekuthethwa ngayo umntu, ukuziva, nokucinga, baya kumqonda loo mntu.
Baya kuba nobuchule kakhulu ekufundeni ulwimi lomzimba lomnye umntu kwaye banokufunda ngenyameko ukunyuka kwamehlo abo. Nangona oku ngokwayo akunangcamango, yinto ebangelwa ukuqwalasela abanye. Ngomqondo othile, iimpathane zinomxholo opheleleyo wokunxibelelana.
Impaths Ngaba Abaphulaphuli Abalungileyo
I-Empath ihlala isithandwa kakhulu kubuntu kunye nentsingiselo, ngoko ke abaphulaphula kakhulu nabacebisi. Baya kuzifumana bebanceda abanye kwaye bahlala bebeka eceleni iimfuno zabo ukuze benze njalo. Yingakho sifumana amaninzi amaninzi kwimisebenzi enxulumene nesihe, njengabaphili, abafundisi, abacebisi kunye nabanonophelo.
Ngumoya ofanayo, banokungafani. Baya kuthula baze bahoxiswe kwihlabathi langaphandle njengoko bathambekele ekubeni ngabaphulaphuli kunokuba bathetha. I-Empath ingabandakanya abantu abanesizungu, abo bacinezelekileyo okanye abanomdla, abahlala kwimihla ngemihla, okanye ngabadliki.
I-Empath ixhuma kunye nemvelo
I-Empath idla ngokuthanda iimeko kwaye ihloniphe ubuhle bayo. Omnye uya kubakho ukufumana imiphumo ephandle ngaphandle, nokuba ngaba uhambahamba elwandle okanye uhamba ngeenkuni.
I-Empath iyakwazi ukuzifumana ihlala isondela kwimvelo njengendlela yokukhululwa. Yindawo efanelekileyo yokuphinda ivuselele iingqondo zabo kwaye bafumane uxolo lokuphila ubomi obunokuthi bahlala kuyo. Ixesha lokuphuma kuyo yonke into kwaye lingadluli kunye nemvelo luba luleke kummandla.
Ezinye izithintelo zithathwa ngakumbi kwizinto ezithile zendalo, njengamanzi. Omnye unokufumana ukuba ukhange ngakumbi kumachibi, emifuleni, okanye elwandle njengendawo yokuthula. Abanye banokuziva baninzi ukuxhamla kwiintaba okanye kwiintlango.
Izilwanyana zihlala zithandwa kwiintliziyo. Akunjalo njengento yamandla kodwa njengothando lwendalo. Akuqhelekanga ukuba kuneendawo ezingaphezulu kweyodwa kwizilwanyana. Iingqungquthela ezinjenge-"lady lady crazy" okanye i-animal communicator zidla ngokuzaliswa yimiphefumlo egxininisayo.
Iimpaths Zizocacisa kwaye zihlaziywa
I-Empath ihlala ikhulile yaye ingathatha ixesha elithile ukujongana nokuncoma. Baye bathambekele ngakumbi ekuboniseni iimpawu ezilungileyo zabanye kunokuba zabo.
Ixesha eliqhelekileyo libonakalisa ukucacisa kakhulu kuzo zonke iinkalo zokuxhamla ngokomzwelo. Baza kuthetha ngokuvulekileyo, kwaye, ngamanye amaxesha, bathetha ngokuthe ngqo malunga nabo. Ngokuqhelekileyo abanengxaki yokuthetha ngeemvakalelo zabo.
Nangona kunjalo, zinokuba zichasene ngqo. I-Empath ingabonakalisa kwaye ibonakala ingaphenduli ngexesha elihle. Le yindlela yokukhusela ukukhusela ukuxhalabisa ngamava okanye amava amaninzi.
Ezinye iimpazamo zilungile kakhulu ukuvimba abanye. Le nto ayisoloko yinto embi, ubuncinane kwimfundo yokufunda ekhungathelana neengxaki zabanye, kunye neemvakalelo zabo.
I-Empath Ngaba Abenzi bokuthula
I-Empath inomdla wokuzivelela ngokucacileyo oko kungaphandle kwabo kunokuba kukho ngaphakathi kwabo. Oku kunokubangela ukuba imingcele ingayinaki imfuno zabo. Ngokuqhelekileyo, umgudu ongeyonto enobudlova, ongeyena unobundlobongela, kwaye uncike ngakumbi ekubeni ngumenzi wokuthula.
Naliphi na indawo ezaliswe ngentsholongwane eyenza ivakalelo ezingenakukhathazeka kwindawo. Ukuba bayazifumana phakathi kwempikiswano, baya kuzama ukulungisa imeko ngokukhawuleza, ukuba bangaziphepheli ndawonye.
Ukuba kukho nawuphi na amazwi angamaqhinga aboniswayo ekuzikhuseleni, ngokuqinisekileyo bayakukhathalela ukungabi nako ukuzithiba. Okukhethiweyo kukusombulula ngokukhawuleza ingxaki ngokukhawuleza.
I-Empath iyakwazi ukuxhaswa yiMidiya
I-Empath iyakhathalela iTV, iividiyo, iifilimu, iindaba, kunye nokusasazwa. Udlwengulo okanye imidlalo ebonisa ukukhathazeka okwenyukayo kwintlungu, abantwana okanye izilwanyana ezinokubangela iintlungu. Ngamanye amaxesha, banokugula okanye baphawule iinyembezi.
Ezinye izithintelo ziya kuba nzima ukuqonda naluphi na ubuqhetseba obunjalo. Baya kuba nobunzima obunzima bokuzibonakalisa ebusweni bokungazi, ukungabikho kwengqondo, kunye nokungahambi komfesane. Akunakukwazi ukuthethelela ukubandezeleka abazivelayo.
I-Empath Ngaba Iindawo Ezikhuselekileyo Zinobubele
Abantu bazo zonke iinkalo zobomi, kunye nezilwanyana, bathandwa kumfudumalo novelwano lokwenene lwengqondo. Kungakhathaliseki ukuba abanye bayayazi ukuba umntu unomdla , abantu bavunywa ngokwemvelo njengento yensimbi kumagnet.
Nabantu abangaziwa ngokupheleleyo bafumana kulula ukuthetha neempembelelo malunga nezinto ezithandayo. Ngaphambi kokuba bazi, baye bathululela iintliziyo zabo kunye nemiphefumlo ngaphandle kokufuna ukwenza njalo. Kunjengokungathi kwinqanaba elincinci lomntu umntu owaziyo ngokuqhelekileyo ukuba ukuthobela kuya kuphulaphula ngokuqonda.
Indlela yokwenza iKombucha Tea
I-Simpson College GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
IziCwangciso zoFundo lweeKinesthetic Abafundi
Imbali emfutshane kakhulu yeThadi
Imbali yobuGcisa 101: Ubugcisa beNeolithic
Iiform Worksheets kunye neMifanekiso Yemibala
Uloba oLwandle olungaphantsi lweeReef